FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BEAGLE - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika beagle
Baylee the Beagle amin'ny 8 volana— 'Noraisinay i Baylee fony izy 3 volana. Fahafinaretana nahafaly azy hatramin'ny andro voalohany. Midradradradra sy midradradradra amin'ny kitties tsy azony fa te hilalao fotsiny izy! Tiany ny mandeha mitaingina fiara, mihaona amin'ny olona vaovao ary milalao amina alika hafa. '
Ny Beagle dia alika kely henjana sy mafy loha izay toy ny bitika kely Foxhound . Vita tsara ny vatany raha lava kosa ny karandohany ary somary feno domelina. Mahitsy sy salantsalany halavany ny vavam-by toradroa. Volontany na hazel ny maso lehibe ary voasaraka tsara. Ny sofina malalaka sy pendant dia ambany sy lava. Ny orona mainty dia malalaka amin'ny vavorona feno. Boribory sy mafy orina ny tongotra. Atao somary avo ny rambony ary tsy aforitra any aoriana. Ny palitao dia lava halavany, akaiky, mafy, malama ary mora karakaraina. Ny karazana fandokoana karazana hound dia ekena ao anatin'izany ny voasarimakirana, tricolor, mainty sy mainty, mena sy fotsy, volomboasary sy fotsy na voasarimakirana sy fotsy, marika manga sy mena mena. Beagles dia manana fidradradradrana sy helodraky ny hodi-kazo rehefa mihaza izy ireo.
Ny Beagle dia be fitiavana, mamy sy malefaka, faly mahita ny olona rehetra, miarahaba azy ireo amin'ny rambony mihodina. Fiaraha-monina, be herim-po ary manan-tsaina izany. Ny Beagle dia tsara amin'ny ankizy ary amin'ny alika hafa dia tsara amin'ny ankapobeny, saingy noho ny fihazana fihazana azy dia tsy tokony hatokisana biby fiompy tsy kaninina, raha tsy hoe mifanerasera amin'ny saka sy biby hafa ao an-trano rehefa tanora. Beagles dia manana ny sainy manokana. Tapa-kevitra izy ireo ary mailo ary mila fampiofanana maharitra sy maharitra. Zava-dehibe ianao mpitarika ny fonosan'ny alika ity ary manome ny habetsaky ny fampihetseham-batana ara-tsaina sy ara-batana, anisan'izany ny isan'andro mandeha tongotra , hisorohana ny fisarahana fanahiana . Milamina tsara izy ireo raha ampy ny fanatanjahan-tena. Azonao atao koa ny mividy fofona biby ary milalao lalao fanarahan-dia amin'ny Beagle anao mba hanampiana hanome fahafaham-po ny toetrany hanaraka. Ny hazo Beagle dia tsy manana hodi-kazo maneno mahazatra, fa kosa kiaka mafy izay toa feo midradradradra fohy. Beagles te hahafanta-javatra ary manana fironana hanaraka ny orony. Raha manangona fofona izy ireo dia mety hirenireny ary tsy henony akory ianao miantso azy ireo hiverina, na tsy te hihaino, satria sahirana loatra izy ireo mitady ny critter amin'ny farany ilany. Mitandrema rehefa avelanao hiala izy ireo fa any amin'ny toerana azo antoka ianao. Beagles avela ho mpitondra entana mihoatra ny olombelona dia afaka mamorona ambaratonga isan-karazany olan'ny fitondran-tena , ao anatin'izany, fa tsy voafetra ho, fiambenana , fanjanahana mibontsina, famaohana, fanaikitra ary fihetsika manimba rehefa avela irery . Tsy toetra Beagle ireo, fa ny fitondran-tena nateraky ny tsy fahampian'ny fitarihana sy / na fanatanjahan-tena avy amin'ny olony. Azo ahitsy ny fihetsika rehefa feno ny toe-tsain'ny alika.
Haavony: Lehilahy 14 - 16 santimetatra (36 - 41cm) Vehivavy 13 - 15 santimetatra (33 - 38cm)
afaka miteraka pitbull miaraka amin'ny chihuahua
Misy kilasy avo roa, 13 - 15 santimetatra (33 - 38 cm) ary ambanin'ny 13 santimetatra (33 cm).
Milanja: Lehilahy 22 - 25 pounds (10 - 11 kg) Vehivavy 20 - 23 pounds (9 - 10 kg)
amboa alika 10 ambony manaikitra
Ny tsipika sasany dia mety ho mora voan'ny androbe, aretim-po, olana amin'ny maso sy lamosina. Mora voan'ny chondroplasia aka dwarfism (tongony eo anoloana izay toy ny an'ny Basset). Jereo ohatra iray amin'ny chondroplasia amin'ny alika . Mora amin'ny fivontosan'ny sela .
Beagles dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha manana fotoana be dia be any ivelany. Mavitrika be izy ireo ao anaty trano ary ampy ny tokotany kely.
Be hery sy manana tanjaka lehibe, mila fanatanjahan-tena be dia be ny Beagle, ao anatin'izany ny haingam-pandeha mandeha isan'andro . Tokony hanana tokotanin-trano mimanda amin'ny habe mirindra izy mba handehanana. Mampiasà firaka foana rehefa mandeha ity karazany ity na mety ho lany tamingana ianao amin'ny fikarohana lalao bibidia.
Alika kely 2 - 14, 7 antonony
Ny akanjo palitao fohy nataon'i Beagle dia mora karakaraina. Borosio amin'ny borosy mafy volo, ary sasao amin'ny savony malefaka raha tsy ilaina. Shampooo maina indraindray. Aza hadino ny manamarina tsara ny sofina raha misy famantarana ny aretina ary tazomy ny hoho. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
lab mainty australian shepard mix
Ny Beagles voalohany dia nanomboka tamin'ny taona 1500. Ny mpihaza anglisy dia maka ny fonosan'ireto alika ireto any mihaza bitro fanenjehana , hare, pheasant, papelika ary biby kely hafa. Mety ho fiampitana teo anelanelan'ny Harrier ary karazana hounds anglisy hafa. Ny alika dia lasa iray amin'ireo karazany malaza indrindra any Etazonia. Ny karazany dia afaka mihaza irery, tsiroaroa na fonosana. Ilay anarana hoe 'Beagle' dia mety ho avy amin'ny teny frantsay hoe 'be'geule' izay midika hoe 'tendan'ny vavony', ilazana ireo feo alika mihetsiketsika. Mety ho avy amin'ny haben'ny alika ihany io anarana io, izay avy amin'ny teny frantsay hoe 'beigh', ny teny anglisy taloha hoe 'begele', na angamba ny teny Celtic 'beag,' izay midika hoe 'kely'. Izy koa dia alika mpitsikilo zava-mahadomelina tena tsara ary manao namana tsara ho an'ny fianakaviana. Fantatry ny AKC voalohany izy ireo tamin'ny taona 1885.
Aloka ny zanak'alika Beagle mainty sy mainty (Lucy aseho etsy ambony no reniny)
Aloky ny alika kely Beagle mainty sy mainty miaraka amin'ny fako misy tricolor azy ilay reny mainty sy mainty (Lucy, aseho etsy ambony) ary ilay raim-borona dia Beagle.
Poncho ilay Beagle lahy amin'ny roa taona— 'Poncho dia alika voavonjy, hita tany amin'ny tondra-drano tany North Carolina, Oktobra 2016. Nisy vondrona mpamonjy voina avy any Pennsylvania tonga tany ary nitondra alika maro tany PA hitady trano. Noraisiko izy tamin'ny Janoary 2017. Mahafinaritra sy mafy loha izy. Tiany ny mankany amin'ny zaridainan'alika ary mitolona amin'ny namany. Tompon'olom-pahefana izy !! Tena tiana izy ary faly izahay nahita azy! '
Hobbs ilay alika Beagle olon-dehibe amin'ny 4 taona
Jack russel rat terrier mifangaro
Buster the Beagle lahy amin'ny 2 taona
pitbull orona manga 1 taona
Kris the Beagle mainty sy fotsy amin'ny taona 1
'Leo ilay voasarimakirana Beagle - Ny masony dia matanjaka, maivana noho ny asehon'ilay sary, saika loko voasarimakirana iray, ary fotsy fotsy ny hoho.'
Emma ilay voasarimakirana sy Beagle fotsy amin'ny 3 1/2 taona
'Ity i Keagan, ilay Beagle mena sy fotsy miandry ahy am-paharetana eo am-baravarana a MANDEHANA . Keagan dia eo amin'ny herintaona sy sasany eo amin'ity sary ity. TIA milalao tavoahangy sy mitsako rawhide izy! Alika azo antoka ny olona ary tiany ny mifihina. Izy dia quirky sy ivelany! Te hiarahaba ny olona hitany izy. '
Lucy ilay Beagle mainty sy mainty dia zokinjokiny taona amin'ity sary ity ary nanomboka volondavenona. Lucy manana fotsy kely eo amin'ny takolany ary ny tongony iray kosa mainty sy mainty ny tongony sisa.
Hijery ohatra hafa momba ny Beagle
Sarin'i Beagle 1
Sarin'i Beagle 2
Sarin'i Beagle 3
Sarin'i Beagle 4
Sarin'i Beagle 5
Sarin'i Beagle 6
Sarin'i Beagle 7
Sarin'i Beagle 8
Sarin'i Beagle 9
Alika Beagle: Sarivongana Vintage azo angonina
lanjan'ny bichon frize eo ho eo
laboratoara mainty manga mifangaro lavaka mifangaro
Zavatra rano alika karazany Info
mpiompy club hybrid amerikana canine
Norfolk terrier mainty sy Tan